Indawo yokugcina iiMiller Firm -Ilungelo laseMelika lokwazi
Ijaji laseMelika lifuna iMonsanto kunye neBayer ukuba iqale iiNtetho zoHlaliso kwi-Roundup Cancer Litigation
ezaposwa ngomhla Aprili 4, 2019 by UCarey Gillam
UMgwebi weSithili sase-US uVince Chhabria ucela uMonsanto kunye nomnini wayo omtsha uBayer AG ukuba baqale ukulamla namagqwetha amaxhoba omhlaza athe amangalela uMonsanto etyhola i-Roundup yayo kunye nezinye i-glyphosate-based herbicides ebangela ukuba ingeyo-Hodgkin lymphoma.
Intshukumo kaChhabria iza emva kokunikezelwa ngetyala leedola ezingama-80 ezigidi kummangali uEdwin Hardeman kwinyanga ephelileyo kwindlu yakhe yenkundla. Kwaye ummangali ophelileyo wasehlotyeni uDewayne "Lee" Johnson wanikwa i-289 yezigidi zeedola yijaji kwinkundla yelizwe, nangona ijaji kwelo tyala yehlisa lo monakalo ukuya kwi-78 yezigidi zeedola.
U-Chhabria wayelumkisile ukuba angathatha inyathelo elinje, kodwa wabonisa ukuba uyakulinda de kube kugqitywe amatyala amathathu ngaphambi kokunyanzeliswa. Uvavanyo lwesithathu lomhlaza we-Roundup lusanda kuqhubeka, nangona kunjalo.
Njengokuba etyhala amaqela ukuba azinzise, ​​uChabbria uwushiyile umhla wetyala ngoMeyi 20 owawumiselwe ityala elilandelayo lomdibaniso. Ityala elo, UStevick v. Monsanto yafakwa ngo-Epreli ka-2016 ngu-Elaine Stevick, ongenayo i-Hodgkin lymphoma, kunye nomyeni wakhe uChristopher Stevick. Esi sibini saya kwinxalenye yetyala likaHardeman.
Ama-11,000 abamangali baye bamangalela iMonsanto, eyathengwa yiBayer ngehlobo elidlulileyo. Ngaphezulu kwama-800 ala matyala abekwa esweni yiChhabria njengemanyano yezopolitiko. Amawaka aliqela ngaphezulu asalindelwe kwiinkundla zikarhulumente kwilizwe liphela.
Abaqwalaseli bacinge ukuba indawo yokuhlala iyonke inokuhamba phakathi kwe- $ 3 yezigidigidi kunye ne-5 yezigidigidi.
I-Bayer iye yaphakamisa isikhundla esime ixesha elide seMonsanto sokuba i-Roundup kunye nezinye i-glyphosate-based herbicides ngaphakathi kwipotifoliyo yomdibaniso zikhuselekile kwaye azibangeli mhlaza. Kodwa abatyali mali eBayer bebesenza isitokhwe senkampani kwaye egxeka iBayer CEO uWerner Baumann Ukuhlawula i-63 yezigidigidi zeedola kwiMonsanto kuphela ukuze ube noxanduva lobutyala. Abanye babongoza ivoti yokungamthembi uBaumann kwintlanganiso yonyaka yenkampani ecwangciselwe umhla wama-26 ku-Epreli. Izabelo zenkampani zilahlekelwe malunga neepesenti ezingama-40 ngexabiso- phantse i-39 yezigidigidi zeedola-ukusukela kwityala likaJohnson ehlobo.
Okwangoku, bekukho iintlantsi zakuqala ezibhabhayo kwityala le-Roundup lomhlaza eliqhubekayo ngoku kwiNkundla ePhakamileyo yase-Alameda County. Kwimeko apho, isibini esitshatileyo saseAlva kunye neAlberta Pilliod bobabini bane-non-Hodgkin lymphoma abathi bayabangelwa kukusetyenziswa kwabo rhoqo kwemithi yokubulala ukhula kaMonsanto.
Igqwetha labamangali uMike Miller libuze iJaji uWinifred Smith ukuba khupha iodolo yokuthintela ixeshana ngokuchasene neMonsanto ngentengiso enzima inkampani ibisenza ukukhusela ukhuseleko lwayo, kubandakanya nentengiso epheleleyo kwiphepha leWall Street Journal ngo-Matshi 25, usuku olwalulungele ukhetho lwejaji kwityala likaPilliod.
IMonsanto iphikisiwe ngokuchaza ukuba amagqwetha abamangali aqhuba uninzi lwezaziso zabo befuna abathengi abatsha kwisimangalo seRoundup. Isindululo siya kuthi sifane nomgaqo-siseko "womyalelo we-gag" kwaye "uvuza uhanahaniso," amagqwetha kaMonsanto aphikisa.
Kwimpikiswano ngokuchasene nomyalelo, amagqwetha kaMonsanto axelele ijaji ukuba iMiller Firm, emele iiPilliods kunye nabanye abamangali abaninzi, baqhuba isibhengezo kwiSan Francisco Chronicle besithi "ukuphindaphindeka okanye ukuphindeka kathathu" komngcipheko we-non-Hodgkin lymphoma Ukuvezwa kweRoundup kwiintsuku nje ezisixhenxe ngaphambi kokuba ityala likaPilliod liqale. UMonsanto uthe kubekho "i-2,187 ye-anti-Roundup yeentengiso zikamabonwakude nonomathotholo ukusukela nge-1 Disemba 2018 ukuya nge-Matshi 21, 2019" kwimakethi yeendaba yaseSan Francisco.
Ujaji Smith wafumanisa ukuba ingxoxo kaMonsanto iyacenga kwaye usikhabe isicelo sabamangali umda kwintengiso.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker UChristopher Stevick, UElaine Stevick, Mike Miller, Ifemi yeMiller, UWerner Baumann, UWinifred Smith